Ọkpụkpụ ihu na ahụ n'ụlọ - Kedu usoro ị ga -eso? | Bezzia
Susana godoy | 13/10/2021 12:00 | Mma
Enwere ọtụtụ agba, ngwaahịa na usoro anyị ga -emerịrị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ilekọta akpụkpọ ahụ ka ọ nye anyị nlekọta ahụ nwayọ nwayọ. Ọ bụ ya mere otu n'ime usoro ndị a ọ ga -abụrịrị peeling na ihu na ahụ n'ụlọ. N'ihi na ha nwere ihe niile anyị chọrọ n'ezie iji gosi nsonaazụ mara mma nke ukwuu.
Ị ma ihe bụ ịchapụ ihu na ahụ n'ezie? Anyị ga -ekpughere gị ihe onye ọ bụla na -ewetara anyị na n'ezie, usoro iji nweta nsonaazụ ka mma karịa ka anyị tụrụ anya ya. Echefula ihe niile na -esote n'ihi na ị nwere ike ime ya nke ọma n'ụlọ ma ọ ga -eju gị anya.
1 Ọ dị mkpa ka pepụ ihu na ahụ dị mkpa?
2 Nhicha bụ nzọụkwụ mbụ maka akpụkpọ ahụ anyị
3 Ngwaahịa akọwapụtara maka akpụkpọ ahụ gị
4 Ude mmiri na -adịghị ahụkebe nke na -adịghị ahụ dị ka ihe na -eme maka ịchapụ ihu na ahụ n'ụlọ
Ọ dị mkpa ka pepụ ihu na ahụ dị mkpa?
N'ezie, ịkpụpụ ihu na ahụ dị mkpa. Maka gịnị? N'ihi na Site na mmegharị a dị mfe anyị ga -eme ka nhicha dị omimi, na -ewepụ sel nwụrụ anwụ na ntabi anya, ka akpụkpọ ahụ wee nwee ike melite ọzọ wee pụta ọzọ were dị mma na ahụike. N'ezie ịmara nke a mgbe ahụ ị ga -amata ịdị mkpa nke mmegharị ahụ mara mma nke juru ebe niile. Maka na ọ bụrụ na anyị asịghị mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ ọfụma, anyị agaghị enye akpụkpọ ahụ anyị ohere ịmụba ọzọ. Yabụ, anyị ga -asị nke ọma ahịrị dị mma kamakwa ntụpọ.
Nhicha bụ nzọụkwụ mbụ maka akpụkpọ ahụ anyị
Agbanyeghị na ọ bụghị nke ikpeazụ ma ọ bụ naanị nzọụkwụ anyị ga -emerịrị, anyị ga -etinyekwu uche na ya. N'ihi na akpụkpọ anụ dị ọcha nwere ike nweta ntọala maka mgbake ka mma. Yabụ, iji mee ka ọ dị ọcha, ọ nweghị ihe dị ka ịkụ nzọ na ngwaahịa ndị bụ isi bụkwa gels dị ọcha ma ọ bụ mmiri micellar. Nke a abụrụla otu n'ime ngwaahịa kacha ere ere, n'ihi na ọ na-asachapụ nke ọma na zuru oke maka ịhapụ akpụkpọ anụ. Na -echefughị ​​na na site n'otu mmegharị ahụ ị nwere ike ịsị mmadụ etemeete mma. Na -echefughị ​​na ọ ga -abụkwa nke zuru oke maka akpụkpọ anụ kachasị emetụ n'ahụ.
Ngwaahịa akọwapụtara maka akpụkpọ ahụ gị
Ka anyị wee ghara ịdị mgbagwoju anya yana ka peeling ihu na ahụ ka ọ bụrụ ngwa ngwa ma ọ bụ karịa, anyị nwere ike iji ngwaahịa ndị akọwapụtara nke ọma. Naanị Anyị ga -etinyerịrị ya n'akpụkpọ ahụ wee banye n'ime ya, naanị anyị ga -eme ịhịa aka okirikiri dị nro ka ngwaahịa ahụ wee nwee ike banye nke ọma na mpaghara ọ bụla. Ọ bụkwa eziokwu na enwere ike ịme usoro a na ngwaahịa anyị niile nwere n'ụlọ dị ka yogọt na obere mmiri mmiri lemon, dịka ọmụmaatụ. Ọ bụ eziokwu na mgbe anyị họọrọ ngwaahịa anyị zụtara, anyị na -ama na nke ọ bụla ọnụọgụ ma ọ bụ ihe egwu anyị chọrọ.
Na nke ahụ exfoliating imecha nke nwere ụfọdụ ngwaahịa anyị nwekwara ike nweta nnukwu nsonaazụ. Ebe ọ bụ na a ga -ewepụ unyi ahụ n'amaghị ama. Ihe dị mkpa yana ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ọzọ ka akpụkpọ ahụ anyị ka siri dị na nro.
Ude mmiri na -adịghị ahụkebe nke na -adịghị ahụ dị ka ihe na -eme maka ịchapụ ihu na ahụ n'ụlọ
Ude mmiri na -egbu mmiri bụ otu n'ime ezigbo ndị enyi anyị ma anyị mara ya. Yabụ, ọ nweghị ihe dị ka iji ohere ọ bụla tinye ya n'ọrụ. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa n'ụtụtụ na abalị niile ka akpụkpọ ahụ na -enwe mmiri mmiri, na nke a, ọ ga -akacha mma. N'ihi na mgbe ịmechara peeling ọ ga -abụ nke zuru oke ịnwa ime ka akpụkpọ ahụ anyị dajụọ. Yabụ, anyị ga -etinyerịrị nke ahụ anyị maara na ọ dị mma maka ụdị akpụkpọ ahụ anyị, ọ bụkwa ya. Site na ngwaahịa ndị ziri ezi, n'ime naanị ụzọ atọ ị ga -enwe ike ịme peeling ihu na ahụ n'ụzọ dị mma. Otu ugboro n'izu, ị ga -achọpụta mgbanwe ndị ahụ ngwa ngwa!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Otu esi eme ezigbo akpụkpọ ihu na ahụ n'ụlọ
Kedu ka m ga -esi mata ma ọ bụrụ na nwamba m na -arịa ọrịa?